Zụta Ezi Adwords YouTube Echiche - Iji Google Adwords
Uru ịzụrụ Real YouTube Views si Mgbasa Ozi
Zube ndị na-ege ntị ziri ezi.
Na mgbasa ozi nkwado anyị, anyị ga-eme nyocha n'elu ikpo okwu iji lekwasịrị ndị na-ege ntị anya nwere mmasị na niche gị site na iji Google Adwords.
Ọ bụ usoro zuru oke iji gosipụta ọfụma ndị na - ekiri ihe ma na - emekwa ka vidiyo ahụ 'Ogologo oge elele oge.
100% Ezigbo Echiche si Mgbasa Ozi YouTube.
Ọ dị mma ma na-agbaso usoro iwu YouTube.
Na-agba ndị ọzọ ume ile vidiyo gị.
Ọ bụ eziokwu na o yikarịrị ka onye ọrụ YouTube na-ahọrọ ikiri vidiyo site na ọwa ole na ole ndị debanyere aha na obere ewu ewu dị obere. Yabụ, mgbe ọwa gị nwere ọnụọgụgụ nke ndị na-ege ntị ezubere, vidiyo gị ga-anabatakarị nnabata n'anya ọchịchị obodo.
Ọzọkwa, mgbe ị na-azụta echiche, ị ga-enweta ihe ngosi mmekọrịta / ntụkwasị obi niile nke ịkwesịrị ime ka ndị mmadụ kwenye na ọdịnaya dị elu ị na-eme.
N'adịghị ka ndị okike ahụ malitere na ncha, ịzụta Ezigbo Echiche na-eme ka mgbasa ozi ịre ahịa YouTube gị ọsọ ọsọ.
Nke a na-enye ọdịnaya gị ohere ịbụ onye a ma ama, n'oge na-adịghịkwa anya, ọ ga-amalite ịdọta ndị ọzọ ndị debanyere aha. N'elu nke a, ọnụego aka ahụ ga-abawanye.
Ọ dị mma maka YouTube & Google Search.
Inweta ọnụ ọgụgụ dị elu nke echiche na-ebute ọkwa dị elu na Youtube seach engine na Google '.
Ọkwa dị elu nke vidiyo gị dị elu, ohere dị elu ha ga-egosi n'elu ndepụta ahụ. N'ihi ya, vidiyo gị ga-adọrọkwu uche, nke na-eduga na ịrị elu dị ukwuu na echiche.
E wezụga nke ahụ, ọ bụghị naanị echiche na ndị na-ege ntị ga-etolite karịa kamakwa ị ga-enwetakwu ndị debanyere aha na mmasị nke ga-emecha mee ka uto YouTube gị nwee n'ọdịnihu.
Na-esote, oge nche na-amalite ịba ụba mgbe ndị na-ekiri vidio na-achọta na ha na-adọrọ mmasị mgbe ahụ ha ga-ele ndị na-esote, dabere na ọdịnaya mara mma ị mepụtara.
Mee ka ewu ewu ọwa.
Icheta ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị ga-enyere gị aka nke ukwuu n'iwulite njirimara gị na ndị nwere ike ịnụrụ.
Nke a dị mkpa n'ihi na ọ na-ekpebi onye ị bụ n'etiti puku ndị asọmpi n'elu ikpo okwu. Na ijikọta na ịme vidiyo dị mma, ị ga-abụ otu nzọ ụkwụ ị ga - abụ onye okike kachasị pụtara na niche gị.
Dabere na vidiyo gị na ihe mgbaru ọsọ onwe gị, anyị ga-enwe atụmatụ iji chekwaa mgbasa ozi Mgbasa ozi kwesịrị ekwesị maka ọwa gị. Ya mere, usoro a ga-ewe oge ma anyị ga-agbakọ oge kachasị oge iji nye gị echiche dị mkpa maka nsonaazụ kacha mma.
Enwere m ike ịzụta nlebara anya mba elebara anya karịa Echiche Wordwide?
Ee n'ezie. Ọrụ a gụnyere nhọrọ abụọ maka "Echiche Zuru ”wa Ọnụ" na Echiche Mba E lekwasịrị Anya. Nwere ike idetu aha obodo ahụ na ihe ịchọrọ ịchọrọ ka anyị lekwasị anya ma ọ bụ hapụ ya ihe efu iji kwalite vidiyo gị n'ụwa niile. Ọ dabere na ihe mgbaru ọsọ gị ịhọrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga - ahọrọ, ka anyị mara iji nweta nkwanye kachasị mma sitere na ọkachamara anyị maka vidiyo gị.
Kedu ka m ga-esi mara echiche si na Mgbasa ozi YouTube?
Lelee isi mmalite nke echiche site na usoro ndị a:
Banye na YouTube Studio.
Na aka ekpe menu, họrọ Nchịkọta.
N'elu peeji ahụ, họrọ Iru.
Họrọ vidiyo ịchọrọ ịlele.
Pịa na akụkọ ụdị okporo ụzọ.
Ga-ahụ akụkọ na-egosi ihe ọmụma zuru ezu metụtara okporo ụzọ okporo ụzọ.
Kedu oge nke nnyefe?
Dịka, ọ na-ewe 12-24 awa iji nata nsonaazụ mgbasa ozi mgbasa ozi nsonaazụ mbụ mgbe akwụchara ụgwọ ahụ. Dabere na ọtụtụ iwu ị nyere, ọ nwere ike were ọtụtụ ụbọchị agbakwunye iji nyefee iwu gị kpamkpam. Ozugbo iwu gị malitere, ị nwere ike ịtụ anya mmụba kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị maghị, anyị ga-eweta usoro gị ngwa ngwa iji mepụta uto okike.
Gịnị bụ nkezi njigide kwa echiche?
N'ezie, ọ nweghị ụzọ isi chọpụta njigide njigide nke echiche ọ bụla n'ihi na ọ dabere na ọdịnaya nke vidiyo ahụ. Ọ bụrụ na vidiyo gị dị mma iji mee ka ndị na-ege gị ntị nọrọ na-ele vidiyo gị, nkezi njigide kwa echiche ga-adị elu na nke ọzọ.
Agbanyeghị, anyị ga-eme nyocha ma dabere na nsonaazụ ndị a iji zụlite ndị na-ege ntị ziri ezi nwere mmasị na niche gị. Gwakọta na vidiyo dị mma, ị ga-enweta nsonaazụ kacha mma site na mkpọsa mgbasa ozi.